July 24, 2019 - ThutaSone
သမီး လေး ဗစ်တိုးရီးယား၏မိခင်ဖြစ်သူ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
July 24, 2019 ThutaSone 0
သမီး လေး ဗစ်တိုးရီးယား၏မိခင်ဖြစ်သူ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရသည့် ကလေးငယ်ဗစ်တိုးရီးယား၏ ဓာတ်ပုံကို လူအများသိရှိအောင်လုပ်မည်ဟု ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှ ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေသည်ဟု ဗစ်တိုးရီးယား၏မိခင်က တရားခွင်တွင်ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိခရိုင်တရားရုံးတွင် ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ဒုတိယရုံးချိန်းတွင် တရားလိုဖြစ်သူကလေးငယ်၏ မိခင်ကိုစတင်စစ်မေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းနှင့်အပြင်သို့သွားလာသည်ကိုပင် တစ်ခုခုလုပ်သွားမည်လားဟု စိုးရိမ်နေရကြောင်း သူမကတရားခွင်တွင်ပြောကြားသည်။ “သမီးက ရွယ်တူချင်းကိုသူငယ်ချင်းလို့ […]
ရန်ကုန်မှာ အဖြစ်များနေလို့ပါဆင်​တုပ်​​ကွေး ကို လက်တွေ့ ​ပျောက်​​စေသောဆေးနည်း
ရန်ကုန်မှာ အဖြစ်များနေလို့ပါဆင်​တုပ်​​ကွေး ကို လက်တွေ့ ​ပျောက်​​စေသောဆေးနည်း သ​င်္ဘောရွတ်​ ကို ​ရေထည်​့ ပြီး၃ ခွွက်​ ၁ခွက်​ တင်​​အောင်​ ကြိုပါ 🍀ထန်​းလျက်​ သင်​့​သောအလုံး​ရေအား လုံးကိုအရည်​ကြို ပါ ၂မျိုး​ပေါင်​းစပ်​ပြီး ​​ဖျော်​၍ ​သောက်​ပါ 🍀၁​နေ့၃ချိန်​ ​သောက်​ပါ လက်​​တွေ့သိရပါမည်​ […]
မိခင်က ငိုပြီးတားတဲ့ကြားက ရဟန်းဝတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ နယ်သာလန်က ဦးအဂ္ဂ မော်လမြိုင်က အပြန် သထုံ ရွှေဆံတော် ဘုရားရှေ့ ကားကြုံတားနေတာ ရှေ့က ကားက ရပ်မပေးတာတွေ့လို့ ကိုယ်တွေက ရပ်ပီး မေးလိုက်မိတာ လှည်းကူးကို တဲ့။ အဲ့အချိန်မှာ သင်္ဃန်းကို လက်ကတော့ထိုး အပြည့်ရုံထားပီး […]
မင်းသားကြီး အမီတာဘဂျမ်းကအာသံရေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက်ရူပီး ၅၁ သိန်း လှူဒါန်း
မင်းသားကြီး အမီတာဘဂျမ်းကအာသံရေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက်ရူပီး ၅၁ သိန်း လှူဒါန်း ကမ္ဘာကျော် ဘောလိဝုဒ် မင်းသားကြီး အမီတာဘဂျမ်း (Amitabh Bachchan) ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ် (Assam State) ရေဘေး ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေအတွက် ရူပီးငွေ ၅၁ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို လက်တွဲကူညီကြဖို့ […]
စင်ကာပူတပ်ချုပ် တပ်ကအနားပေးလိုက်တဲ့အရပ်ဖက် ရထားကုမ္ပဏီမှာ ဝန်ထမ်း ဝင်လုပ်
တပ်ကအနားပေးလိုက်တဲ့ စင်ကာပူတပ်ချုပ် အရပ်ဖက် ရထားကုမ္ပဏီမှာ ဝန်ထမ်း ဝင်လုပ် စင်ကာပူရထားကုမ္ပဏီမှာ စီမံခန့်ခွဲရတဲ့အလုပ်ဟာ နေ့စဉ်အောက်ခြေပြည်သူတွေရဲ့ သွားရေးလာရေး အစဉ်ပြေဖို့နဲ့ ပါတ်သက်နေတာကြောင့်၊ ပြည်သူ့အငြိုအငြင်ခံရနိုင်ခြေများပြီး၊ ခဏခဏလူကြီးပြောင်းရလေ့ရှိတဲ့ hot seat ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ စခဲ့တဲ့ စင်ကာပူရထားတွေဟာ အိုမင်းလာလို့ မကြာခဏရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်တွေမှာ ပြသနာဖြစ်တတ်လို့ […]
ဒုတိယအကြိမ် ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအပြီးမှာ ဆရာမနှင်းနုကို ဒုတိယတရားခံအဖြစ် ဦးတိုက်လျှောက်
ဒုတိယအကြိမ် ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအပြီးမှာ ဆရာမနှင်းနုကို ဒုတိယတရားခံအဖြစ် ဦးတိုက်လျှောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးချိန်းမှာတော့ တရားလို မိခင်ကိုယ်တိုင်က ကလေးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခဲ့သူရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားခွင်မှာ ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ […]
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားလေး ရဲ ့နောက်ဆုံးရအရေးအကြီးဆုံသတင်း
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားလေး ရဲ ့နောက်ဆုံးရအရေးအကြီးဆုံသတင်း ဒီနေ့ ( 24. 7. 2019 ) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်း Victoria လေးရဲ့မိခင်အားစစ်ဆေးချက်အရ အောက်ပါအချက်များအား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ – အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့က Victoria လေးရဲ့အကြိုအပို့ကားသည် ပို့နေကျကားမဟုက်သည့်အပြင် လာပို့သည့်ဆရာမမှာလည်း ပို့နေကျဆရာမဟုက်ကြောင်းထွက်ဆိုသည်။ – မိခင်မှကလေးအားဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိမေးမြန်းစဉ် […]
ဖုန်​းနဲ့ပိုက်​ဆံ အိတ်​လုခံလို့ ဗိုက်​ကိုလက်​နဲ့ဖိပြီး ​ခြေတရွတ်​တိုက်​ဆွဲသွား​နေတဲ့ မန်​း​လေးက ခရီးသွားညီ​လေး
ဖုန်​းနဲ့ပိုက်​ဆံ အိတ်​လုခံလို့ ဗိုက်​ကိုလက်​နဲ့ဖိပြီး ​ခြေတရွတ်​တိုက်​ဆွဲသွား​နေတဲ့ မန်​း​လေးက ခရီးသွားညီ​လေး အ​ေ ဝ​ပြေး ကားဝင်​းမှာ ဖုန်​းနဲ့ပိုက်​ဆံအိတ်​ လုခံရ လို့ ဗိုက်​ကိုလက်​နဲ့ဖိပြီး ​ခြေတရွတ်​တိုက်​ဆွဲသွား​နေတဲ့ မန်​း​လေးက ခရီးသွားညီ​လေး ​တွေ့ရင်​ကုညီ​ပေးကြပါအုံးဗျာ သနားပါတယ်​။ မန်းလေးကတဲ့ဗျာ ဒီနေ့ကျနော်ဆေးခန်းသွားယင်းနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ခြေဒရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးဗိုက်ကိုနှိပ်ပီးသွားနေတာ ညီလေးဘာဖြစ်နေတာလဲမေးတော့ သူ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ဖုန်းကအလုခံလိုက်ရလို့တဲ့ ဗိုက်ကလဲအောင့်နေတာစကားသိတ်မပြောနိူင်ဘူး […]
မ​ကွေးတိုင်​း​ဒေသကြီး​ရေနံ​ချောင်​းမြို့နယ်​တွင်စက်လှေတိမ်းမှောက်၍လူ (၃၀) ဦး ကျော်ပျောက်ဆုံးနေ
စက်လှေတိမ်းမှောက်၍လူ (၃၀) ဦး ကျော်ပျောက်ဆုံးနေ 24-7-2019 မ​ကွေးတိုင်​း​ဒေသကြီး​ရေနံ​ချောင်​းမြို့နယ်​ ဖရဲကျွန်​း​ကျေးရွာနှင်​့ကန်​သာရွာတို့ ပဋိပက္ခဖြစ်​စဉ်​တွင် ဖရဲကျွန်​း​ကျေးရွာမှ လူတစ်​ဦး ဓားခုတ်​ခံရ၍​ သေဆုးံပြီး​မော်​​တော်​နစ်​မြုပ်​မှု့​ကြောင်​့လူ(၃၈)ဦး​ပျောက်​ဆုးံ​နေ​ကြောင်​း ဖရဲကျွန်​း​ဒေသခံထံမှ သိရသည်​။ ပဋိပက္ခဖြစ်​စဉ်​မှာ ဇူလိူင်​(၂၃)ရက်​​နေ့ ၄နာရီခန်​့ ည​နေပိုင်​းတွင်​ဖြစ်​ပွား ခြင်​းဖြစ်​ပြီး၊​ ဖရဲကျွန်​း​ကျေးရွာမှ​ ဒေသခံများ​ မော်​​တော်​ဖြင်​့ ပြန်​လာစဉ်​နစ်​မြုပ်​ခြင်​းဖြစ်​​ကြောင်​း သိရသည်​။ ယင်သု်​့​ိမော်​​တော်​နစ်​မြုပ်​ခြင်​း​ကြောင်​့ […]
ယူပစ်သလိုခါးနာတာကို ပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း
ယူပစ်သလိုခါးနာတာကို ပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း ကွန်ပျူတာ သုံးတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ ခါးနာ ရောဂါလည်း ဖြစ်လာ တာပေါ့။ ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ခါးက ပိုနာ လာတယ်။ ဆေးနည်းက နက္ခတ္တ ရောင်ခြည်ကနေ ရထားတာ ကြာလှပြီ။ အမှုအမှတ်မဲ့ မစမ်းကြည့် ဖြစ်ဖူး။ အခုတော့ […]